Fanaovam-baksiny ny Praiminisitra | Primature
Fanaovam-baksiny ny Praiminisitra
Mahazoarivo, 26 Aogositra 2021 – Ao anatin’izao fitohizan’ny ady amin’ny valanaretina covid-19 izao dia nanatona ny hopitaly Joseph Raseta Befelatanana Andriamatoa Ntsay Christian, Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, hatao vaksiny fanefitra ka ny « Janssen » avy amin’ny orinasa mpamokatra fanafody « Johnson & Johnson » no natao taminy.
Naneho ny hafaliany tamin’ny fahavitana ny fanefitra ny Praiminisitra ka nambarany fa nanome ohatra ho an’ny vahoaka amin’ny maha-mpitondra azy ny tenany, ary nomarihiny fa tsy an-tery ny fanaovam-baksiny saingy entanin’ny fitondram-panjakàna kosa ho fiarovana sy fitsinjovana ny vahoaka Malagasy.
Ny fanjakàna rahateo, hoy izy, no nanome alalana tamin’ny fampidirana izany vaksiny izany teto Madagasikara.
Nantitranterin’ny Praiminisitra nandritra ny fotoana androany fa ny fahasalaman’ny vahoaka Malagasy manontolo no vaindohan-draharahan’ny Filoham-pirenena tamin’ny fanapahan-kevitra nanafarana izao vaksiny izao fa tsy ny mahakasika an’ireo mpitondra sy mpitantana ankehitriny.
← Fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fizaràna lay misy odimoka maharitra
Fahamaizana tao amin’ny kaominina Fasintsara →
Fitondrana vahaolana ho famongorana tanteraka ny hanoanana mitarazoka na kere